Al Qacida oo u hanjabtay Sweden | Somaliska
Sida uu qoray wargeyska Svenska Dagbladet Alqacida ayaa u hanjabtay Sweden ka dib weerarkii fashilmay ee bishii December. AlQacida ayaa ugu hanjabtay Sweden weeraro cusub asagoo Wargeysku soo xigtay Website lagu magacaabo Inspire oo la sheegay in uu xiriir la leeyay Ururka AlQacida. Mowduuca Websiteka AlQacida lagu qoray ayaa lagu yiri "Waxaa la joogaa waqtigii ay Sweden dib uga fiirsanlahayd dhaqankeeda ku aadan Islaamka iyo Muslimiinta inta aysan Mujaahidiintu weerar kale soo qaadin". Hanjabaada weerarka ayaa la sheegay in uu ka dambeeyo sawiradii lagu aflagaadeeyay nabiga (nnkh) ee uu sawiray ninka Swedishka ah ee lagu magacaabo Lars Vilks. Hay'da Amaanka ee Sweden (SÄPO) ayaa sheegtay in ay la socdaan hanjabaada oo mowduuca wargeyska uu noqon karo mid ay fuliyaan dadka xagjirka ah.
Al Qacida oo u hanjabtay Sweden
Sida uu qoray wargeyska Svenska Dagbladet Alqacida ayaa u hanjabtay Sweden ka dib weerarkii fashilmay ee bishii December. AlQacida ayaa ugu hanjabtay Sweden weeraro cusub asagoo Wargeysku soo xigtay Website lagu magacaabo Inspire oo la sheegay in uu xiriir la leeyay Ururka AlQacida.
Mowduuca Websiteka AlQacida lagu qoray ayaa lagu yiri “Waxaa la joogaa waqtigii ay Sweden dib uga fiirsanlahayd dhaqankeeda ku aadan Islaamka iyo Muslimiinta inta aysan Mujaahidiintu weerar kale soo qaadin”.
Hanjabaada weerarka ayaa la sheegay in uu ka dambeeyo sawiradii lagu aflagaadeeyay nabiga (nnkh) ee uu sawiray ninka Swedishka ah ee lagu magacaabo Lars Vilks.
Hay’da Amaanka ee Sweden (SÄPO) ayaa sheegtay in ay la socdaan hanjabaada oo mowduuca wargeyska uu noqon karo mid ay fuliyaan dadka xagjirka ah.
“Sharciga waa ka ceshanaynaa qaxootiga”